आईओएस १.13.१ बिटा स्थापना गरेपछि कसरी आईओएस १ to मा फर्काउने आईफोन समाचार
पछिल्लो हप्ता, कपर्टिनोका केटाहरूले यस सुरू गरे आईओएस १.13.1. first पहिलो बेटा, एक आन्दोलन जुन अहिलेसम्म अघिल्लो बर्षमा गरिएको थिएन र त्यसले त्यो संकेत गर्‍यो आईओएस १ the को अन्तिम संस्करण व्यावहारिक रूपमा तयार छ नयाँ आईफोन २०१ range दायराको प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम समाप्त भएपछि केही मिनेट सुरु गर्नुपर्नेछ।
यो घटना सेप्टेम्बर १० मा हुनेछ। यदि तपाईं स्वचालित अपडेटहरू सक्रिय छन् भने, तपाईंको टर्मिनल आईओएस १.10.१ को नयाँ बिटामा अपडेट हुनेछ, त्यसैले जब आईओएस १ of को अन्तिम संस्करण जारी हुन्छ, तपाईंसँग त्यो संस्करण डाउनलोड गर्ने संभावना हुँदैन। यदि तपाईँ चाहानु हुन्छ भने डाउनग्रेड र आईओएस १vert मा फिर्ता हामी तपाईंलाई पछ्याउने चरणहरू देखाउछौं।
1 IOS १.13.१ बाट आईओएस १ to मा कसरी डाउनग्रेड गर्ने
2 कसरी आईओएस १ bet बेटा प्रोग्राम छोड्ने
3 के आईओएस १ bet बीटा मूल्यको साथ टाँसिएको छ?
IOS १.13.१ बाट आईओएस १ to मा कसरी डाउनग्रेड गर्ने
पहिलो, यो प्रक्रिया पूरा गर्दा तपाईंले दुई पटक सोच्नु पर्छ, किनकि कुनै डाउनग्रेड प्रक्रिया, पछिल्लो संस्करणमा फिर्ता जान, यसको लागि आवश्यक छ हाम्रो उपकरणबाट सबै सामग्री हटाउनुहोस्। पछिल्लो संस्करणमा फर्केर जाँदा, यदि हामीसँग उच्च संस्करणको ब्याकअप छ भने, हामी यसलाई पुन: भण्डार गर्न सक्षम हुनेछैनौं हाम्रो उपकरणमा।
यदि तपाईं स्पष्ट हुनुहुन्छ कि तपाईं यो प्रक्रिया पूरा गर्न चाहनुहुन्छ भने, निम्न चरणहरू निम्नानुसार छन्। सबै भन्दा पहिले तपाईं बचत गर्न चाहानु भएको सबै सामग्रीको प्रतिलिपि बनाउनु हो। यदि तपाईंले आईक्लाउडमा ब्याकअप सक्रिय गर्नुभयो भने यो पर्याप्त भन्दा बढी छ।
सबै भन्दा पहिले, हामीले जाँच गर्नु पर्छ कि हामीले स्थापना गर्यौं हाम्रो कम्प्युटरमा आईट्यून्स को नयाँ संस्करण।
अर्को, हामीले गर्नै पर्छ हाम्रो आईफोन जडान गर्नुहोस्, वा आईप्याड, केबल मार्फत हाम्रो टीममा।
अर्को हामीले आफ्नो आईफोनमा रिकभरी मोड सक्रिय गर्नुपर्नेछ:
फेस आईडीको साथ आईफोन वा आईप्याडका लागि: थिच्नुहोस् र चाँडै भोल्यूम अप बटन रिलीज गर्नुहोस्। भोल्युम डाउन बटन थिच्नुहोस् र चाँडै छोड्नुहोस्। उपकरण रिबुट गर्न सुरु नभएसम्म माथिको बटन थिच्नुहोस् र समाउनुहोस्। शीर्ष बटन थिच्नुहोस् र समाउनुहोस् जबसम्म उपकरण पुन: प्राप्ति मोडमा प्रवेश गर्दैन
आईफोन 8 / 8 प्लस: थिच्नुहोस् र चाँडै भोल्यूम अप बटन रिलीज गर्नुहोस्। भोल्युम डाउन बटन थिच्नुहोस् र चाँडै छोड्नुहोस्। त्यसपछि साइड बटन थिच्नुहोस् र होल्ड गर्नुहोस् जब सम्म रिकभरी मोड स्क्रिन देखा पर्दैन।
आईफोन //7 प्लस / आईपड टच (generation औं पिढी): एकै समयमा स्लीप र भोल्युम डाउन बटन थिच्नुहोस् र होल्ड गर्नुहोस्। जब तपाईं एप्पल लोगो देख्नुहुन्छ बटन रिलीज नगर्नुहोस्। दुबै बटन थिच्नुहोस् र समाउनुहोस् जब सम्म तपाईं रिकभरी मोड स्क्रिन देख्नुहुनेछ।
आईफोन ss, आईप्याड शारीरिक बटन र अघिल्लो संस्करणहरूको साथ: थिच्नुहोस् र निद्रा बटन र गृह बटन होल्ड गर्नुहोस्। हामीले दुबै बटन थिच्न रोक्नु हुँदैन जबसम्म यो रिकभरी मोडमा उपकरणको स्क्रीनमा देखा पर्दैन।
त्यस समयमा, आईट्यून्सले हाम्रो उपकरणमा खराबी भएको पत्ता लगाउनेछ हामीलाई हाम्रो उपकरण पुन: भण्डारण गर्न आग्रह गर्दै। हाम्रो उपकरणको पुनर्स्थापनाले यसको सबै सामग्री, सामग्री मेटाउने समग्र रूप धारण गर्छ जुन हामीले मात्र पुनर्स्थापना गर्न सक्नेछौं यदि हामीले आईओएसको समान संस्करणको साथ ब्याकअप गरेका छौं जुन हामीले स्थापना गर्न लाग्यौं।
पुनर्स्थापना, आईट्यून्समा क्लिक गर्दै IOS को नयाँ संस्करण स्वचालित रूपमा डाउनलोड हुनेछ एप्पलको सर्भरहरूमा आईओएस १२..12.4.1.१ मा हाल उपलब्ध छ र यसको स्थापनाको साथ अगाडि बढ्नेछ।
यदि हामी सार्वजनिक बिटालाई फेरि पहुँच गर्ने प्रक्रियामा जान्छौं, हामी फेला पार्नेछौं कि एप्पलले आईओएस १ 13.1.१ को दोस्रो बीटा प्रस्ताव गर्दछ, त्यसैले हामी पनि फेरि त्यस्तै समस्या हुनेछौं। यसले हामीलाई फरक आईओएस १ bet बिटाका बिभिन्न IPSW हरूको लागि इन्टरनेट खोजी गर्न बल गर्दछ। बिभिन्न आईओएस १ bet बिटाको IPSW त्यो एप्पलले जारी गर्यो। अन्तिम नम्बर was थियो, आईओएस १.13.1.१ बीटा १ को विमोचन अघि।
कसरी आईओएस १ bet बेटा प्रोग्राम छोड्ने
बीटा प्रोग्राम छोड्नुहोस् ताकि हाम्रो उपकरण एप्पल अपडेट चक्र अनुसरण गर्नुहोस् यो एक धेरै साधारण प्रक्रिया हो र यसले हामीलाई सधैं आईओएसको स्थिर संस्करणको आनन्द लिन मद्दत गर्दछ। बीटाहरू बेटास हुन्, अन्तिम संस्करणको विमोचन हुनु अघि परीक्षण संस्करणहरू, त्यसैले तिनीहरूको प्रदर्शन, कहिलेकाँही, प्राय: सबै भन्दा बढी सन्तोषजनक हुँदैन, त्यसैले तिनीहरूलाई उपकरणमा स्थापना गर्न कहिल्यै सल्लाह दिइदैन जुन हामी हाम्रो काममा प्रयोग गरिरहेका छौं, मा। दिन दिनै…
सबै भन्दा पहिले हामी टाउको सेटिंग्स> सामान्य।
अर्को, क्लिक गर्नुहोस् प्रोफाईलहरू। यो सेक्सन भित्र, हामीले हाम्रो उपकरणमा स्थापना गर्नु भएका सबै प्रोफाइलहरू प्रदर्शित हुनेछन्।
हामी आईओएस १ select चयन गर्दछौं र क्लिक गर्नुहोस् प्रोफाइल मेट्नुहोस्।
यो सुनिश्चित गर्न कि हामी टर्मिनलका वैध मालिकहरू हौं, हामीलाई iOS हाम्रो आईफोनको कोड अनुरोध गर्दछ।
अर्को, तपाईं हामीलाई सोध्नुहोस् हामी प्रोफाईल मेट्न चाहन्छौं भनेर यकिन गर्नुहोस्।
एकचोटि हामीले डिलीटमा क्लिक गरेपछि, हामी यो देख्नेछौं कि आईओएस बीटाको प्रोफाइल हाम्रो टर्मिनलबाट गायब भयो र हामीले स्थापना गरेको केवल एक मात्र यदि यो मामला हो भने मात्र देखाइन्छ।
यदि हामीसँग हाम्रो उपकरणमा कुनै पनि अन्य प्रोफाइल स्थापना गरिएको छैन भने, सेटि optionहरूमा प्रोफाइल विकल्प> सामान्य देखिने छैन।
के आईओएस १ bet बीटा मूल्यको साथ टाँसिएको छ?
यहाँ सबै कुरा तपाइँको इच्छा को लागी निर्भर गर्दछ समाचार परीक्षण गर्नुहोस् जुन एप्पलले क्रमिक आईओएस अपडेटहरूमा परिचय गराउन गइरहेको छ। सुरुमा, अन्तिम डब्ल्यूडब्ल्यूडीसीमा प्रस्तुत गरिएका अधिकांश समाचारहरू आईओएस १ of को अन्तिम संस्करणको साथ आइपुग्नेछ, विगतका वर्षहरू जस्तो नभई सम्बन्धित डब्ल्यूडब्ल्यूडीसीमा प्रस्तुत केही प्रकार्यहरू करीव एक बर्ष पछि आएनन्।
यदि तपाईं आफ्नो टर्मिनल सही ढ to्गले काम गर्न चाहनुहुन्छ भने ब्याट्री समस्या, अनुप्रयोग खराबी, अप्रत्याशित पुन: शुरूआत वा बेटाको प्रयोगसँग सम्बन्धित कुनै अन्य समस्या प्रस्तुत नगरी, तपाईंले यो प्रोग्रामको उपयोग गर्नुहुन्न। त्यो यदि, विगत दुई बर्षमा, आईओएस बीटा प्रणाली स्थिरता प्रदान गर्दै छन् जुन हामीले पहिले सोचे पनि थिएन। यो स्थिरता एउटा कारण हो किनकि एप्पलले अन्तिम प्रयोगकर्तालाई बिटा प्रोग्राम खोल्ने निर्णय गरे।
सार्वजनिक बीटा कार्यक्रम कपर्टिनो कम्पनीलाई अनुमति दिन्छ छिटो मिलाउनुहोस् समस्याहरू जुन आईओएसको संस्करणहरू जुन तपाईं बजारमा सुरू गर्नुहुन्छ प्रस्तुत गर्न सक्दछ। यस तरीकाले, अर्को अपडेटको बीटा चरण सँधै पछिल्ला बर्षहरूको तुलनामा एक छोटो अवधि हुन्छ।
एप्पलले आईओएसको अर्को संस्करणका लागि सुरू गर्नुहुने बिभिन्न बिटाहरू स्थापना गर्न, सम्बद्ध एप्पल प्रमाणपत्र स्थापना भएको हुनु आवश्यक छ, कि त यो विकासकर्तालाई वा सार्वजनिक बीटा कार्यक्रमको हिस्सा हुनेहरूलाई वितरण गर्दछ। जबसम्म हामीसँग कुनै प्रमाणपत्रहरू स्थापना गरिएको छ, हामी एप्पल द्वारा प्रकाशित विभिन्न iOS बेटा प्राप्त गर्नेछौं।
यदि हामी बेटा प्राप्त गर्न रोक्न चाहन्छौं भने, हामीले गर्नै पर्ने पहिलो कुरा हो हाम्रो उपकरणबाट त्यो प्रमाणपत्र हटाउनुहोस्। यो प्रमाणपत्र हटाएर, हाम्रो उपकरण अपडेटको सामान्य चक्रमा फर्कनेछ, त्यो हो कि एप्पलले अन्तिम संस्करणहरू जारी गर्दछ। यदि प्रमाणपत्र हटाउने समयमा अन्तिम संस्करण जारी हुन्छ र तपाईं सम्बन्धित सूचना प्राप्त गर्नुहुन्न, यो किनभने तपाईंसँग पहिले नै उही संस्करण स्थापित छ जुन भर्खर स्थापना भएको थियो।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS 13 » आईओएस १ to.१ बिटा स्थापना गरेपछि कसरी आईओएस १ to मा फर्काउने